Waji walba wuxuu tebiyaa sheeko! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Waji walba wuxuu tebiyaa sheeko!
Waji walba wuxuu tebiyaa sheeko!
Previous: Giroud oo doorbidaya ka tegista Arsenal hadduusan helin boos joogta ah.
Next: Warbixin ku saabsan Subaca iyo Soomaalida – Bisha Ramadaan.